Waldiyaan har'as rakkoo keessa jirti jedhame - BBC News Afaan Oromoo
Guyyaa Wiixata har'aa gara ganamaa naannoo buufata konkolaataa jedhamee beekamutti dhukaasi sagalee olaanaa dhagahamaa turuusaa jiraattonni Magaalaa Waldiyaa har'a BBC'tti himaniiru.
Pirezidaantiin naannoo Amaaraa miseensoonni ittisa raayyaa magaalattii gadhiisanii ni bahu jechuun waadaa galanillee, ganama har'aa humni dabalataa gara magaalattii galuunsaanii ka'umsa mormii ta'eera.
Mormii Magaalaa Waldiyaatti boromtaa ayyaana cubbaa umameen tarkaanfii humnooti nageenyaa fudhataniin, lubbuun namootaa darbuunsaa ni yaadatama. Motummaannis lakkoofsi namoota ajjeefamanii torba yoo jedhu, jiraattonni garuu kana caalaa jedhu.
Mormii guyyaa Sanbataa ummameen walqabatee, guyyaa Dilbataa dhaabbilee daldalaa fi manneen jireenyaa kan daldaltootaa, qondaaltoota naannichaafi kan deeggartoota motummaadha jedhaman hedduu irra miidhaan dhaqqabuu isaa jiraattoonni magaalichaa BBC'tti himaniiru.
Wiixata ganamas miseensonni raayyaan ittisa magaalattii keessaa hin baane jechuun, dhaabbilee motummaa irratti miidhaan raawwatameera.
Pirezidaantiin Naannoo Amaaraa, Obbo Gadduu Andaargaachaw kalleessa irraa kaasuun jiraattoota magaalattii walitti qabuun mariisisaa jiru. Hirmaattoota marichaa keessaa dargaggoon tokko bilbilaan akka nutti himetti, marii kaleessa gaggeefameen, hirmaattoonni miseensoonni raayyaa ittisaa attatamaan magaalattii keessaa akka bahaniif gaafatanii turan.
''Obbo Gadduunis akka bahaniif waadaa kan galanii turan ta'ulleen, har'a ganama gara sa'aatii afuriitti humni raayyaa ittisaa dabalataa gara magaalattii galuun daandiiwwaniifi qaxxaamurawwan magaalattii irratti bobba'aniiru'' jedhu jiraattoonni nuti dubbifne.
Dargaggoonni magaalichaa haala kanaan aaraniis, har'a waaree booda waajjira misooma magaalaa Waldiyaa irratti miidhaa qaqqabsiisaniiru.
Dargaggoon marii Pirezidaantii naannichaa waliin taasifamee irratti hirmaate ture kan biraa akka jedheetti, abbootii amantaa dabalatee, hirmaattoonni marichaa gaaffiilee jijjirama sirnaa barbaanna jedhaniifi haqa, dhabiinsa hojii fi gaaffiilee biroo hedduu pirezidaantichaaf dhiyeessaniiru.
Kiyyeefannaa miidhaa kanaa
Guyyaa walitti bu'iinsichi taasifamee kaasee miidhaa lubbuufi qabeenyaa namootaa irra gaheen alattis, qabeenyaa irrattis miidhaa qaqqabeera. Kiyyeefannaan miidhaa kanaa eenyu akka ta'eelleen jiraattoota gaafannee turre.
Namoota haasofsiifne keessaayis tokko, 'miidhaan kan raawwatame qabeenyaafi manneen qondaaltoota naannichaafi deeggartoota motummaa kanneen dargaggoota eeruun hisiisaniidha'' jedheera.
''Mana jireenyaa kantiibaa magaalattiifi hoteela Machaarree abbuumman isaa dhalataa naannichaa ta'ee irratti miidhaan qaqabeera. Kanaan alattis qabeenyaa deegartoota motummaa ta'an irratti miidhaan qaqabsiifame malee, waan dhalataa naanoo biraa ta'aniif qofa miidhaan raawwatame hinjiru'' jechuun mormeera.
Gama biraatiin ammoo, dhallattoota naannoo Tigiraay dabalatee, qabeenyaawwan qondaaltootaa fi deeggartoota mootummaa irratti miidhaan raawwatameera, jechuun jiraataan magaalattii kan biraa nutti himaniiru.
Wayita ammaa kanattis magaalaa Waldiyaa keessatti sochiin wayii akka hinjirre, jiraattoonni hedduunis nageenya isaaniitiif sodaachuun mana jireenyaatii gadi bahuu irraa ofi qusachuusaanii nutti himaniiru.
Naannoo Amaaraa Magaalaa Waldiyaatti namoonni torba yoo ajjeefaman hedduun madaa'aniiru